सुन्दर र जवान देखिन अप्नाउनुहोस् यी ८ उपाय - NepalTale
नेपाल टेल	प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १८, २०७७ समय: ११:०२:१०
सुन्दर भन्नेवित्तिकै धेरैजसो मानिसले राम्रो अनुहारलाई मात्र बुझ्ने गरेका छन्। तर, अनुहार मात्र हेरेर सुन्दरताको मापन हुँदैन। सुन्दर र जवान देखिन शीरदेखि पाउसम्म मात्र होइन, सोचमा पनि सुन्दरता झल्किएको हुनुपर्छ। अनुहारका साथसाथै, कपाल, नङ, लवाई इत्यादिले सुन्दर बन्न सघाउँछ।
सुन्दर र जवान देखिने तरिका
ठिक समयमा सुत्नेः शरीरलाई एकदम सुन्दर बनाउन सबैभन्दा पहिला सुत्ने समय ठिक हुनुपर्छ। वयस्क व्यक्तिले दैनिक ६ देखि ८ घन्टा सुत्नुपर्छ। जसले हाम्रो शरीरलाई फ्रेस बनाउँछ। बेलुका चाडै सुत्र्ने र बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। दैनिक सुत्ने समय एउटै बनाए मात्र हाम्रो शरीर र अनुहारको लागि राम्रो हुन्छ। शान्त वातावरणमा सुत्ने गर्नुपर्छ।
सन्तुलित भोजन गर्नेः सन्तुलित भोजन भन्नाले शरीरलाई सक्षा गर्ने खानालाई बुझ्नु पर्छ। सन्तुलित भोजन मिलाएर गर्नु शरीरका लागि फाइदाजनक छ। सकेसम्म बढी मात्रामा सरियो साग, फलफुल, बदाम, काजु, ओखर, आल्मन भएका खानेकुरा दैनिक सेवन गर्नुपर्छ। जसले गर्दा शरीर सुन्दर र जवान देखिन्छ। एन्टिअक्सिजन भएका खानेकुरा जस्तैः ग्रिन टि, सुगर फ्रि बढी मात्रामा खाने गर्नुपर्छ। रक्सी, कोल्डड्रिङ्स, वाइन, जस्ता पेय पदार्थ घटाउने। क्याफिन, कफीको मात्रा कम गर्नुपर्छ।
केमिकलको प्रयोग नगर्नेः कतिपय क्रिममा केमिकलको मिसावट भएको पाइन्छ। त्यस्ता क्रिमको प्रयोगले हानि पुर्‍याउँछ। साथसाथै अनुहारमा पाउडर प्रयोग गर्नुहुँदैन। पाउडरले अनुहारलाई सुख्खा बनाउँछ र चाँडै चाउरी बनाउँछ।
घोप्टो परेर नसुत्नेः सुताइले सुन्दरतालाई धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले सुत्दा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। घोप्टो परेर सुत्ने गर्दा अनुहारमा पिम्पल आउने गर्छ। नरम खालको सिरानीको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ।
माथि उल्लेखित सबै उपाय अपनाउँदा पनि आफू सुन्दर नदेखिएको महसुस हुन्छ भने छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ।
काठमाडौं महानगरले फुटबल क्लबलाई बाँड्यो…
सुशान्त सिंह मृत्यु प्रकरण :…
नेपाल एयरलाइन्सका ३ पाइलटमा कोरोना…
ओली-प्रचण्डको ‘वान टु वान’ वार्ता…
नेकपा विवाद मिलाउन दोस्रो तहका…
चिनियाँ राजदूतको सक्रियतापछि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न- नेपाली नेताहरु छिमेकी नभइ मिल्न सक्दैनन् ?
पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर घट्यो कोरोना संक्रमण, कहाँ कति ? (तालिका)
सबैभन्दा धेरै कोरोना प्रभावित देशमध्ये भारत तेस्रो स्थानमा
आज २९३ जना कोरोना संक्रमित थपिए, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ३० जना
६३ सहसचिबको सरुवा, वरिष्ठहरु प्रदेशतिर, कनिष्ठ राजधानीमा (सुचीसहित)
बाग्लुङको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं महानगरले फुटबल क्लबलाई बाँड्यो ६० लाख नगद
सुशान्त सिंह मृत्यु प्रकरण : प्रहरी चौकी पुगे निर्माता संजय लीला भंसाली
ओली-प्रचण्डको ‘वान टु वान’ वार्ता सकियो
गल्वान भ्यालीमा चीन पछि हट्यो, भारत खुशी!
आज सुनको भाउ घट्यो, चाँदीको स्थिर
वैदेशिक रोजगार बोर्डमा खड्का र गुरुङ मनोनित